WordPress Form Form miaraka amin'ny Spam Protection Version 2.0.0 Navoaka! | Martech Zone
Alahady, May 6, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: Tena manoro hevitra aho Gravity Forms avy amin'ny RocketGenius ho an'ny fampidirana endrika matanjaka amin'ny WordPress!
Miaraka amin'ny fanehoan-kevitra maherin'ny 140, ny endrika fifandraisan'ny WordPress miaraka amin'ny Spam Protection dia hatreto, ny plugin malaza indrindra nanampy ahy hampivelatra. Efa alaina an'aliny izy io ary ny lahatsoratra no malaza indrindra amin'ny tranokalako. Nahazo fanehoan-kevitra marobe momba ilay plugin aho ary nanapa-kevitra ny hanao izany, amin'ny farany rehetra ny tolo-kevitr'ireo mpamaky ahy!
Ireto misy sasany amin'ireo fiasa:
Ny fahaizana mamorona lisitry ny latsaka ambany lohahevitra.
Ny fahaizana manao ny valin'ny fanamby ho saropady na tsia.
Fanatsarana fanampiny mba hisorohana ny fanombanana ireo tagan'ny script any an-tsaha.
Ny fahaizana mametraka tsipika lohahevitra misy toerana na mamela ny mpampiasa hampiangona ny azy manokana.
Fitaovana tsara kokoa miaraka amin'ireo saha misongadina.
Raha manavao ity kinova ity ianao (2.0.0), mariho azafady fa tsy maintsy manova ny kaody ao amin'ny pejin'ny contact ianao izay mametraka ny kaody. Fanehoan-kevitra taloha ary ankehitriny dia kofehy fanolo mahazatra.
Mandehana mankany amin'ny Pejy Tetikasa raha mila fanazavana fanampiny sy rohy fampidinana iray!
May 6, 2007 ao amin'ny 8: 29 PM
Asa lehibe, tsy maintsy hampiasa an'ity amin'ny tranokala vaovao novolavolaina izao aho.
May 6, 2007 ao amin'ny 9: 15 PM
Misaotra Wes! Naharitra volana vitsivitsy aho vao nahavita ny asa mila ataoko amin'ity plugin ity. Manantena aho fa hanamboatra azy amin'ny fiteny maro sy hanampy fomba amam-panaovana fomba hafa amin'ny ho avy… te-hamoaka azy fotsiny izao aho!
May 6, 2007 ao amin'ny 11: 41 PM
Nampiasa iFrames sy endrika HTML hafa aho talohan'io. Ary ankehitriny dia mieritreritra aho fa hanandrana an'ity rafitra ity izao.
May 7, 2007 amin'ny 8: 48 AM
Fanatsarana mahafinaritra! Azo inoana fa havaoziko amin'ity pejy ity ny endrika fifandraisana WP misy ahy rehetra. Ny tsipika fanao mahazatra dia fanampiny tsara.
Hampiako ao amin'ny lisitry ny plugin ao amin'ny wpZipper ihany koa.
Azonao atao ny mieritreritra ny hanome anarana vaovao azy io, mba hahafahan'ny olona manavaka azy tsara kokoa amin'ny plugin (Form) Contact Form teo aloha.
Fifandraisana Karr? (Notoheriko ny fampiasana «K» roa sosona)
May 7, 2007 amin'ny 9: 59 AM
Heveriko fa mety ho hevitra ratsy ny fanovana ny anarana amin'izao fotoana izao - efa impiry aman'alina izy io no alaina ary hatreto dia ny pejiko miasa indrindra. Ary… ilay anarana, "Formuliran'ny fifandraisana amin'ny WordPress miaraka amin'ny fiarovana amin'ny spam", dia manana lanja SEO lehibe. 🙂
May 7, 2007 ao amin'ny 8: 19 PM
Ah, tsy nandinika ny tantaran'ny plugin-nao akory aho. Eny, ny fanovana anarana dia toa hevitra ratsy amin'ny eritreritra faharoa.
May 7, 2007 amin'ny 8: 12 AM
Salama Douglas, mbola tsy nampiasa an'ity plugin ity aho, fa mety apetraho ao amin'ny bilaogiko ato ho ato.
Tsy fantatro akory fa namolavola ireo karazan-javatra ireo ianao, angamba tokony hijanona matetika kokoa aho.
Saingy, te-hiala kely fotsiny aho ary hanao hiarahaba. Toa iray volana eo ho eo izay raha mbola tsy nanao hiarahaba aho.
May 7, 2007 amin'ny 8: 20 AM
Tongasoa indray ary tiako ianao mba hizaha matetika kokoa. 🙂
Azonao atao ny manamarina ny tetik'asa fampandrosoana rehetra ao amin'ny Pejy tetikasa. Nahazo tranokala roa maromaro eo an-dàlam-pamokarana koa aho izay tokony hahaforona splash mahafinaritra!
Mbola ho avy ny hafa!
May 7, 2007 ao amin'ny 1: 55 PM
Douglas, vatolampy izay. Misaotra betsaka noho ny fanaovana plugin tsara toy izao izay efa hitako fa mahasoa amin'ny tranokala nataoko mba tsy ahazoana tombony ary mieritreritra aho fa hahita zavatra ilaina indray amin'ny tranonkala ataoko ho an'ny zaodahy mpanakanto .
May 7, 2007 ao amin'ny 3: 56 PM
Miloka ianao, John! Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra tsara. Raha afaka mieritreritra endri-javatra fanampiny ianao dia aza misalasala mametraka andalana iray ho ahy.
May 7, 2007 ao amin'ny 1: 15 PM
Asa lehibe Doug. Somary nanana olana aho tamin'ny naha-miasa an'io tamin'ny voalohany, saingy hitako fa mamafa ny pejiko mpifandray taloha ary mamorona vaovao no nahavita ilay tetika.
May 7, 2007 ao amin'ny 3: 57 PM
Misaotra Dean. Nanana olana tamin'ny WP-Cache tsy tapaka aho, na inona na inona izany. Matetika aho no namono azy io mandra-pahatongako ilay pejy nilako azy ary avy eo niverina teo amin'ny cache aho.
May 8, 2007 ao amin'ny 3: 10 PM
Asa lehibe indray Doug! Toa marefo be ilay takelaka fifandraisana, kasaiko ampiana amin'ny tranokalako io raha vantany vao mahazo minitra fanampiny fanampiny aho…
May 10, 2007 ao amin'ny 7: 43 PM
Manokana fotoana hanoratana zavatra mahafinaritra foana ianao! Tena tiako ilay izy!
May 10, 2007 ao amin'ny 8: 02 PM
Tsy misy olana Doug - manao asa tsara foana ianao ato amin'ity bilaogy ity, amin'izay dia ho mora aminao ny hanana zavatra tsara holazaina 🙂
May 15, 2007 amin'ny 8: 55 AM
OKay, ampiasaiko ity amin'ny ny tranokalako, ary rad. Izay ilaiko fotsiny, plus tsara kokoa. Misaotra anao nanao ny endrika fifandraisana WordPress tonga lafatra !!
May 15, 2007 amin'ny 9: 12 AM
Miloka ianao, Shawn! Ho fanaingoana bebe kokoa ho avy! Ny fahaizana manampy fanontaniana fanampiny ary ampanjifaina ny layout sy ny style!
May 17, 2007 amin'ny 11: 01 AM
Zavatra iray tiako ho fantatra: ahoana no fomba hanaovanao ny hevitrao tahaka izao? Tiako ny afaka manana safidy hamaly ny fanehoan-kevitra, sns. Toa tsara izany.
May 17, 2007 amin'ny 11: 16 AM
Shawn, izany ny valiny tapitrisa dolara! Tena nanoratra ireo olona tsara tao amin'ny Akismet aho ary nanontany azy ireo raha te hiara-hiasa amiko hamorona an'ity izy ireo ho an'ny fanehoan-kevitra ary tsy nafana fo tamin'izy ireo izy ireo.
Na izany aza, WordPress 2.2 dia manana fahaiza-manao fanamarihana vaovao ka mety azo atao ny mamorona plugin. Hihady sy hihady aho!
May 18, 2007 amin'ny 4: 06 AM
Douglas, ahoana no ahalalanao fa ho avy ny andro nahaterahako?!?
Mahafinaritra izany! Ny Plugin tsara indrindra hatrizay! Ary rehefa nieritreritra aho fa tsy afaka nihatsara! 🙂
May 18, 2007 amin'ny 6: 13 AM
Tsingerintaona nahaterahana, Joni! Faly mihaino azy. Mbola ho avy ny hafa! Aza hadino izany zahao ireo tetikasako hafa!
Jun 4, 2007 ao amin'ny 9: 50 PM
Nanampy famotsorana vaovao aho anio alina miaraka amin'ny boaty tsy azo adika handika ny tenanao amin'ilay fandefasana.
Jun 7, 2007 ao amin'ny 1: 49 PM
Hey Doug- Azo antoka fa efa elaela. Nifanena tamin'ity plugin ity aho rehefa nitady. Asa lehibe amin'izany.
Fanontaniana: ahoana no hanampianao lisitra midina araka ny voalazanao? tokony hiditra ao amin'ny pejin'ny fifandraisanay ve isika ary hanampy fotsiny '(Safidy A | Safidy B | sns…)? Toa tsy mety amiko. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy ampy amiko.
Jun 7, 2007 ao amin'ny 2: 05 PM
Mampiavaka ny famoahana farany, Dean. Raha manana ny famoahana farany ianao - eny, azonao atao ny manampy ny lohahevitrao ary manafoana azy ireo amin'ny alàlan'ny Pipe iray.
3 Jul 2007 amin'ny 2:48 PM
azo atao ve ny 'manaisotra' ity plugin ity mba hamakiana toy izao:
'Ny mailanao: [boaty fampidirana lahatsoratra] [bokotra mandefa]' ?????
tena tsotra. ary apetrak'ilay mpampiasa ao anatin'io boaty io ny mailany, ary halefa any amin'ny iray amin'ireo mailakay izahay, hidiran'ny mpampiasa amin'ny lisitry ny mailaka (izay ampidirinay tanana).
lavitra loatra ny fomba fampiasana plugin WP ho an'ny asa tsotra?
Ary koa, rehefa avy nokapohan'ny olona ny bokotra 'mandefa' amin'ny pejy inona no nakana azy ireo? sa manamarina ny fandefasana?
mihobia ho an'ny fanampianao!
3 Jul 2007 amin'ny 8:34 PM
Mieritreritra aho fa nivily niankavia ianao tany ho any… tsy plugin fisoratana anarana mailaka io, fa plugin iray ho an'ny pejy fifandraisana. Mila fitaovana famandrihana mailaka ianao, manoro hevitra an'i Feedburner aho.
Jul 24, 2007 amin'ny 1: 36 AM
Thanx ho an'io plugin tsara io. Io no farany. Azonao atao ny mahita azy amin'ny asany ao amin'ny tranokalako ihany koa. Nihena be ny vesatry ny spam.
Sep 4, 2007 amin'ny 9: 50 AM
Salama, efa nitady endrika fanehoan-kevitra momba ny tranokalan'ny mpanjifa mifototra amin'ny WordPress aho. Tian'izy ireo ny hanana endrika roa ho an'ny vondrona roa samy hafa mampiasa ilay tranonkala.
Azo atao ve izany amin'ny plugin-nao?
Sep 8, 2007 amin'ny 8: 04 AM
Nohavaozina amin'ny 2.0.7 androany. Mampiasa wp_mail ity kinova ity - fanovana lehibe noho izany Callum Macdonald. Ho anao rehetra izay nisedra olana tamin'ny mailaka niasa tamin'ny mpampiantrano anao - izany no tokony hanaovana izany!
7 Okt 2007 amin'ny 1:38 PM
Te hampiasa endrika roa amin'ny tranokala iray aho, azo atao ve izany?